IPocophone F1 nayo iya kuba nohlaziyo kwi-MIUI 11 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IPocophone F1 iya kuba nakho ukufikelela kwi-MIUI 11
UXiaomi ubonise i-MIUI 11 kule veki ngokusemthethweni. Ukongeza ekunikezeleni le nguqulo intsha yomaleko wayo wokwenza ngokwezifiso, uphawu lwesiTshayina luveze uluhlu lweefowuni eziza kuba nakho ukufikelela kulo. Nangona abaninzi babemangalisiwe koko iPocophone F1 yayingekho kolu luhlu. Ifowuni ekuphela kwayo esungulwe phantsi kolu phawu ukuza kuthi ga ngoku.
Le yinto evelise intelekelelo eninzi, kodwa ekugqibeleni isonjululwe yinkampani uqobo. Kuba kuqinisekisiwe ukuba oku I-Pocophone F1 iya kuba nakho ukufikelela kuhlaziyo kwi-MIUI 11. Iindaba eziqinisekisa uninzi lwabasebenzisi abanemodeli ephezulu.
Kule meko ibingu-Alvin Tse, intloko yehlabathi yohlobo, ebephethe Qinisekisa ukuba iPocophone F1 iya kuba neMIUI 11. Ezi ntlobo zoluhlu zihlala ziqala, ukuze iifowuni ezintsha zihlala zigqitywa ukongezwa kuyo, yiyo loo nto eyenzekayo ngeli xesha ngesixhobo sokutyikitya.
Abasebenzisi abaninzi babenamathandabuzo, kuba uphawu lwesiTshayina lubonakala ngathi luyishiyile le fowuni kwaye umntu oza kungena ezihlangwini zakhe ecaleni. Impumelelo enalo uphawu olufana noRedmi Kwimarike kuye kwagxila ekuweni kolo phawu. Oko kuthetha ukuba i-POCO yinkampani enokunciphisa ubukho bayo.
Nangona inkampani igcina le Pocophone F1 ihlaziywa, ngoxolo lwabasebenzisi. Ke kuqinisekisiwe ukuba xa iphehlelelwa kwilizwe jikelele, i-MIUI 11 iya kuphehlelelwa kwesi siphelo siphezulu. Nangona okwangoku kungekho zinkcukacha zinikiweyo malunga nemihla yabo enokubakho.
Ke ngoko, kuya kufuneka silinde ithutyana ukuze sifumanise xa uhlaziyo kwi-MIUI 11 luya kukhutshwa yale Pocophone F1 yohlobo. Ubuncinci sele siyazi ukuba baya kuba nokufikelela kuyo, eyayiyenye yeenkxalabo zabasebenzisi abaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IPocophone F1 iya kuba nakho ukufikelela kwi-MIUI 11
I-Redmi 8A: Uluhlu lokungena olutsha lwebhrendi